Xaafada 12, aad Ee M.M.J Oo Kuguulaysatay Koobkii - Cakaara News
Xaafada 12, aad Ee M.M.J Oo Kuguulaysatay Koobkii
Jigjiga(CN) Sabti, 23ka january 2016, Tarantankii kubada cagta ee 20ka xaafadood ee maamulka magaalada jigjiga ayaa maanta kusoo gabagaboobay garoonka kubada cagta ee kuliyada tababarada macalimiinta Dr,cabdimajiid Xuseen.
Loolankan kubada cagta ee dhalinta MMJ oo maalmahanba si habsan uga soo socday garoomada kaladuwan ee magaalada ayaa wax la isasoo reeb-reebaba waxaa maanta finalka isugu yimid labada kooxood ee kala ah: kooxda xaafada 12, aad VS kooxda xaafada 17, aad ee mmj iyadoo kooxda xaafada 12, aad ay halkaa guushu ku raacday oo 2 gool iyo 1 kaga adkaatay xaafada 17, aad. Koobkii tartankana sidaa kuhanatay.
Hadaba tartankan ayay xidhitaankiisii kasoo qaybgaleen dhamaanba taageerayaasha dhinacyada kaladuwan ee 20ka xaafadood ee magaalada jigjiga, shacab tiro badan, wasiir kuxigeenka xafiiska cayaaraha iyo dhalinyarada mudane Cabdishakuur Cismaan Khayre, mayorka maamulka magaalada jigjiga mudane Axmed Maxamuud Axmed iyo marti sharaf kale.
Mayorka MMJ mudane Axmed Maxamuud Axmed oo uu weheliyo kuxigeenka xafiiska cayaaraha iyo dhalinyarada mudane Cabdishakuur Cismaan ayaana halkaa kugudoonsiiyay koobkii kubada cagta ee 20ka xaafadood ee mmj. Waxaa intaa dheer, in xubnihii anshaxa wanaaga muujiyay, kuwii ugu goolal badnaa iyo kuwii galay kaalmaha kaladuwan ee tartanka iyana halkaa abaal marino kaladuwan lagu gudoonsiiyay.